ချစ်သူမိန်းကလေးက ထားခဲ့မှာကြောက်လို့ ကောင်မလေးကို တရားဝင် ချပြလာခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်စံ – Cele Snap
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ချိုသာတဲ့ အပြုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသား ကောင်းမြတ်စံကတော့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ တရုတ်မင်းသားလေးတစ်ယောက်လို ကြည့်ကောင်းသူမို့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးခြင်းကို ခံရသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမြတ်စံကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမြတ်စံကလည်း သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာအလုပ်တွေကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကြိုးစားပြီး လုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေကို အမြဲတမ်း စနောက်ကျီစယ်လေ့ရှိတဲ့ ကောင်းမြတ်စံက ဒီကနေ့မှာလည်း ပရိသတ်တွေကို အံ့သြသွားရအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမြတ်စံက “သူ့ဘက်က ကျွန်တော့်ကိုထားခဲ့မှာစိုးလို့ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ official ချပြရတာပါ…. ၂ယောက်လုံးကို ချစ်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ ….” ဆိုပြီး ဘာမှမရှိတဲ့ ပုံအလွတ်တွေ ကိုချပြပြီး ပရိသတ်တွေ အံ့သြသွားရအောင် စနောက်လာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကောင်းမြတ်စံကတော့ သူ့ရဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကို အသည်းကွဲရအောင် ဆေးကြီးကြီးထိုး စနောက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကောင်းမြတ်စံရဲ့ အတည်ပေါက်နဲ့နောက်တာကို စိတ်မဆိုးလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
Source: Kaung Myat San’s fb
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ ခြိုသာတဲ့ အပွုံးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မငျးသား ကောငျးမွတျစံကတော့ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးနဲ့ တရုတျမငျးသားလေးတဈယောကျလို ကွညျ့ကောငျးသူမို့ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခွငျးကို ခံရသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမွတျစံကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှမြေားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သလို ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှမှောလညျး ကရြာဇာတျရုပျကို အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမွတျစံကလညျး သူ့ကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ အနုပညာအလုပျတှကေို တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ကွိုးစားပွီး လုပျကိုငျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ပြျောပြျောနတေတျပွီး ပရိသတျတှကေို အမွဲတမျး စနောကျကြီစယျလရှေိ့တဲ့ ကောငျးမွတျစံက ဒီကနမှေ့ာလညျး ပရိသတျတှကေို အံ့သွသှားရအောငျ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ကောငျးမွတျစံက “သူ့ဘကျက ကြှနျတေျာ့ကိုထားခဲ့မှာစိုးလို့ ဓါတျပုံနဲ့တကှ official ခပြွရတာပါ…. ၂ယောကျလုံးကို ခဈြပေးမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျဗြာ ….” ဆိုပွီး ဘာမှမရှိတဲ့ ပုံအလှတျတှေ ကိုခပြွပွီး ပရိသတျတှေ အံ့သွသှားရအောငျ စနောကျလာခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
ကောငျးမွတျစံကတော့ သူ့ရဲ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှကေို အသညျးကှဲရအောငျ ဆေးကွီးကွီးထိုး စနောကျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ကောငျးမွတျစံရဲ့ အတညျပေါကျနဲ့နောကျတာကို စိတျမဆိုးလောကျဘူးလို့ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။